सिल्ल्ट उत्तम बेस्ट डाटा स्क्रैपिंग सफ्टवेयर विचार गर्न प्रस्ताव गर्दछ
तपाईंको प्राथमिकता को ब्लगहरु र साइटहरु को डेटा प्राप्त गर्न को लागि विभिन्न तरिकाहरु छन्. केहि डाटा स्क्रैपिंग प्रविधिहरू विकासकर्ताहरू र उद्यमहरूका लागि उपयुक्त छन् जबकि अरू गैर-प्रोग्रामरहरू र फ्रान्सेन्सरहरूका लागि हुन्।. वेब स्क्रैपिंग एक जटिल प्रविधी हो जसले संरचित जानकारी मा असंगत डेटा बदल्छ. यो मात्र लागू हुन्छ जब हामी विश्वसनीय र प्रामाणिक सफ्टवेयर र उपकरणहरू प्रयोग गर्दछौँ. निम्न उपकरणहरु साइटहरु संग बातचीत र एक संगठित रूप मा उपयोगी डेटा प्रदर्शित.
1 - men's race day hats. सुन्दर सूप:
यो पाइजोन लाइब्रेरी XML र एचटीएमएल फाइलहरू स्क्रैप गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ. यदि तपाईं Ubuntu वा डेबियन प्रणाली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सुन्दर सूप स्थापना गर्न सजिलो छ.
2. आयात गर्नुहोस्. Io:
आयोत. io एक नि: शुल्क विज्ञापनहरु स्क्रैपिंग उपकरण हो जसले हामीलाई जटिल र सरल साइटहरु दुवै को डेटा को स्क्रैप गर्न र यसलाई डाटासेट मा व्यवस्थित गर्दछ।. यो उत्कृष्ट र यसको आधुनिक र प्रयोगकर्ता को अनुकूल इंटरफेस को लागि जानिन्छ.
मोजाडा एक अन्य उपयोगी र अद्भुत वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो जुन यसले हामीलाई स्क्रैप गर्न र धेरै साइटबाट सामाग्री खिच्न सजिलो बनाउँछ।. यो दुवै नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँछ.
पार्सहेब भिजुअल वेब स्क्रैपिंग उपकरण हो जुन पाठ र तस्विरहरू स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ।. तपाइँ समाचार कार्यक्रम, यात्रा पोर्टलहरू र अनलाइन रिटेलरहरूबाट डेटा प्राप्त गर्न यो कार्यक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
अक्टोपारे क्लाइन्ट-साइड वेब स्क्रैपिंग उपकरण विण्डोजको लागि हो. यसले असंगत डेटालाई संगठित फारममा कुनै कोडको आवश्यकता बिना बदल्न सक्छ. यो प्रोग्रामर र विकासकर्ता दुवैको लागि राम्रो छ.
क्रलम्यान्स एक अद्भुत वेब स्क्रैपिंग प्रोग्राम हो जुन एक स्क्रैपर र वेब क्रलर दुवै को लागी काम गर्दछ. यो व्यापक रूप देखि एसईओ विशेषज्ञहरु को द्वारा प्रयोग गरिन्छ र तपाईंलाई एक बेहतर तरीका मा साइट को स्कैन गर्न दि्छ.
कोटोटेट एक स्वचालित वेब स्क्रैपिंग उपकरण हो।. तपाईलाई केवल परामर्श अनुरोध गर्नु पर्दछ र तपाइँका डेटा निकाल्न कसरी चाहनुहुन्छ भन्ने केही उदाहरणहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ.
8. साधारण क्रल:
साधारण क्रल हामीलाई उपयोगी डेटासेटहरू प्रदान गर्दछ जुन हाम्रो वेबसाइटहरू क्रल गर्नका लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।. यसले तपाईंको कच्चा डाटा समावेश गर्दछ, र तपाईंको साइट खोज इञ्जिन रेटिङ सुधार गर्न मेटाडाटा निकाले.
क्रेलले स्वचालित रूपमा स्वचालित स्क्रैपिंग र डेटा निष्कर्षण सेवा हो जसले एकाधिक साइटहरू स्क्रैप गर्न सक्छ, आफ्नो कच्चा डेटा ढाँचामा ढाँचामा बदल्न सक्छ।. तपाई परिणामहरू JSON र CSV ढाँचामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
10. सामग्री ग्रेडबर्बर:
सामग्री ग्रैबर्बर सबैभन्दा शक्तिशाली वेब स्क्रैप सफ्टवेयर हो. यसले स्टाइल-एक्लै वेब स्क्रैपिंग एजेन्टहरूको सुविधाजनक निर्माणलाई अनुमति दिन्छ.
डिफबोट एक डेटा स्क्रैपिंग उपकरण र एक वेब क्रलर. यसले तपाइँका वेब पृष्ठहरूलाई एपिआईहरूमा बदल्दछ, तपाईंलाई उत्तम परिणामहरू प्रदान गर्दछ.
12. डेक्स. Io:
Dexi. io पेशेवरहरु र नवागका लागि आदर्श छ. यो क्लाउड वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रमले तपाईंको डाटा स्वचालित बनाउँछ र तपाईंलाई मिनेट भित्र इच्छित नतिजा प्राप्त गर्दछ. यो दुवै नि: शुल्क र प्रीमियम संस्करणहरूमा आउँछ र जाभास्क्रिप्ट फाईलहरू पनि गर्न सक्दछ.
13. डाटा स्क्रैपिंग स्टूडियो:
डेटा स्क्रैपिंग स्टुडियो एचटीएमएल, एक्सएमएल, पीडीएफ दस्तावेजहरु संग साथै एकाधिक वेब पृष्ठहरु को डेटा कमाउँछ।. यो हाल केवल विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ.
FMiner दृश्य आरेख डिजाइनर र वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर हो जसले तपाईंलाई यसको म्याक्रो रेकर्डिङ विकल्पको साथ परियोजनाहरू निर्माण गर्न दिन्छ।.
Grabby एक अनलाइन वेब स्क्रैपिंग सेवा हो जुन इमेल ठेगानाहरु र वेब पेजहरु को डेटा को स्क्रैप गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो ब्राउजर आधारित कार्यक्रम हो जुन चीजहरू प्राप्त गर्न कुनै स्थापना आवश्यक पर्दैन.